Velon-taraina ireo mponina noho ny halatra sy vaky trano misesisesy. Maro ireo fianakaviana very entana sy biby fiompy izay mba hany fananan’ireo tantsaha. Tsy nipetra-potsiny ny polisy fa nanao ny fisafoana sy ny fitadiavana ireo nahavanon-doza. Roa herinandro taty aoriana, tratra ambodiomby teo am-panatanterahana ny asa ratsiny ny lehilahy miisa roa raha namaky tranona fianakaviana iray ary mbola tratra teny amin’izy ireo ny “télé écran plat” vao azony. Lehilahy iray ihany koa no nosamborina izay fantatra fa mpividy ireo entana halatra. Tamin’ny fanadihadiana no nahalalana fa mampiasa fanafody gasy izy ireo rehefa mamaky trano ary rendriky ny torimaso avokoa ireo olona ao an-trano ka tsy maheno azy ireo mangalatra ny entana. Nidoboka am-ponja vonjimaika izy telo lahy.